Kitra vehivavy – «Division elite»: mitarika hatrany ny AC Sab-Nam Analamanga | NewsMada
Kitra vehivavy – «Division elite»: mitarika hatrany ny AC Sab-Nam Analamanga
Par Taratra sur 15/05/2019
Efa madiva hifarana ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra vehivavy “Division elite”. Hatreto, mbola mitarika hatrany ny AC Sab-Nam Analamanga.
Niditra tamin’ny andro fahadimy, omaly talata, ny fifanintsanana, eo amin’ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny baolina kitra vehivavy “division elite”. Toy ny mahazatra, teny amin’ny kianja Carion Manjakandriana hatrany no nanatanterahina izany. Misongadina aloha hatreto, ireo ekipa lehibe.
Anisan’ireny, ny AC Sab-Nam Analamanga, izay mbola mitarika eo amin’ny filaharana vonjimaika. Nanamafy izany toerana misy azy izany, ry zareo, tamin’ny fandreseny ny Mifa Analamanga, tamin’ny isa mazava, 2 no ho 0. Baolina tafiditr’i Nivo, teo amin’ny fizaram-potoana voalohany avokoa, ny voalohany matiny teo amin’ny minitra faha-25 ary ny faharoa, teo amin’ny minitra faha-34.
Mbola mipetraka ny fahaiza-manaon’ireo mpilalaon’Avaradrano, izay nanantombo teo amin’ny tanjaka sy ny traikefa. Niezaka nanohitra ihany ny Mifa, saingy lesoka ho azy ireo, ny famonoam-baolina. Manana isa 49 ny AC Sab-Nam, taorian’ity fandresena azony, ity.
Manaraka azy ireo eo amin’ny laharana faharoa, ny Askam Itasy, manana isa 48. Ny tovovavin’Itasy, nanilika ny Som Boeny, tamin’ny isa 4 no ho 0. Baolina telo matin’i Tinah, teo amin’ny minitra faha-10 sy ny faha-81 ary ny 90 mn + 2. Voafidy ho mpilalao mendrika, tamin’io lalao io ihany koa ny tenany. Ny baolina iray kosa, tafiditr’i Clara, teo amin’ny minitra faha-25. Faharesena voalohany ity, ho an’ny ekipan’i Boeny.
Ankoatra izay, resin’ny Ascuf Matsiatra Ambony, tamin’ny isa 3 no ho 0 ny Asot Analamanga. Vokatra, tsy nampoizin’ny rehetra, tamin’ity andro fahadimy ity.
Tsy mbola mihiratra ho an’ny AS Comato Atsimo Andrefana kosa ny masoandro, izay mbola resy indray nanoloana ny FC Prescoi Vakinankaratra, tamin’ny isa, 3 no ho 1.
Hiato ny fifaninanana, amin’ity anio ity ary hitohy rahampitso alakamisy.